Diyo post :: करिश्मामाथि खुलेआम हिंसा गर्नेलाई के हुन्छ ? करिश्मामाथि खुलेआम हिंसा गर्नेलाई के हुन्छ ? - Diyo post
नयाँ शक्तिको औपचारिक उद्घाटनका दिन करिष्मा मानन्धरका विषयमा भएका टिका टिप्पणीका विषयमा मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।
केही शुभचिन्तकले करिष्माले सोचे अनुरूप प्रस्तुति दिन नसकेर निराश भई आक्रोश पोख्नु फरक कुरा हो, तर उनको अस्मितामाथि प्रहार हुनेगरी सामाजिक संजालमा गाली गलौज गर्नुलाई मैले नेपाली महिलामाथि खुलेआम भएको गम्भीर हिंसाको रुपमा लिएको छु।
करिष्मा उद्घोषक होइनन्। उनी अभिनेत्री हुन्। हामी सबैलाई थाहा छ। छायाङ्कन स्थलमा केही camera persons र Technicians अगाडि अरू कसैले लेखिदिएको स्कृप्ट दोहोर्याएर “ok” गर्नु र स्टेजमा हजारौं मानिसको भीडमा “single take” मा परिस्थिति अनुकुल रहेर स्वविवेक सहित live प्रस्तुति दिनु फरक विषय हुन्।
म शिक्षक हुँ । Teachers Trainer पनि हुँ । लगातार घन्टौंसम्म विविध विषयमा बोल्न सक्छु। रेडियो/ टेलिभिजनमा live कार्यक्रम गरेको अनुभव छ। केही नेपाली फिल्ममा अभिनय तथा केही नायकको (अभिनेता) Playback voice dubbing गरेको छु। मैले 1500 बढी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका स्टेज कार्यक्रम संचालन गरेको छु। VIP/ VVIP/ माननीय/ सम्माननीय/ महामहिम सबै सम्मिलित कार्यक्रम सन्चालन गरेको छु। कार्यक्रम प्रस्तोताको रूपमा लाखौं मान्छे अगाडि निर्धक्क बोल्न सक्छु। तर, दुई मिनेटको स्वागत मन्तव्य दिनु पर्यो भने मेरा खुट्टा काम्छन्। बोल्न नसक्नेले किन तम्सिनु भन्नेलाई म के भनुँ ।
टेलिभिजनका केही नाम चलेका Celebrity VJ तथा समाचार वाचक सङ्गै co-host गर्दा साथीहरूले stage मै समाचार पढिदिन्थे। professional रूपमै MC गर्नेले पनि सबै खालका कार्यक्रम संचालन गर्न सक्दैनन्। मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम र औपचारिक दुवै खालका कार्यक्रम संचालन गर्न धेरै कमले मात्र सक्छन्। गलत अर्थ नलागोस्, मैले थुप्रै नाम चलेका professional उद्घोषकले पनि बिगारेको देखेको छु। एक पटक मैले रसियन राजदुतावासले आयोजना गरेको कार्यक्रममा Vladimir Novikov लाई “भ्लादिमिर पुटिन” भनेर बोलाएको छु।
करिष्मा जान्ने भएर गएकी होइनन्। उनलाई अवसर दिइएको हो, करिष्माको हिम्मतलाई प्रोतसाहन गरौं।
करिष्मा कसैकी छोरी, कसैकी आमा, कसैकी पत्नी हुन्। समग्रमा उनी नेपाली नारी हुन्। नारीलाई हरेक क्षेत्रमा अघि बढ्न हौसला र सहयोग गरौं। अनावस्यक गालीगलौज गर्नेले सक्नुहुन्छ भने कार्यक्रम कसरी सन्चालन गर्ने सिकाएर देखाइदिए राम्रो हुन्थ्यो कि।
म मान्छु उनी राजनीतिमा परिपक्व छैनन्, तर राजनीतिमा खारिएकाले खै के पो गरे र !
करिष्माजीलाई सुझाव: अबदेखि तयारी गरेर मात्र जानुहोला। तपाईं glamour बाट बौद्धिक बहस हुने क्षेत्रमा जानुभएको छ। अध्ययन गर्ने बानीको विकास गर्नुहोला।
( म नयाँ शक्तिको कार्यकर्ता नभएको जानकारी गराउन चाहान्छु)